Mpanamboatra sy mpamatsy volavolan-drywall avo lenta | Yanzhao
Volo maina vita amin'ny vy vita amin'ny karbaona na vy tsy misy fangarony no ampiasaina hanamafisana ny rindrina maina amin'ny baza hazo na amin'ny vy vy. Manana kofehy lalina kokoa noho izy ireo izy ireo karazana visy hafa, izay afaka misoroka azy ireo tsy hanala mora amin'ny drywall.
Ny visy drywall matetika dia visy volo miaraka amina kofehy lava sy teboka maranitra. Voasokajy amin'ny faritry ny kofehy, misy karazana kofehy volafotsy drywall roa mahazatra: kofehy tsara sy kofehy madity.
Misy vinaingitra maranitra kokoa ny visy volo maina, izay manamora kokoa ny fametahana azy. Matetika izy ireo no ampiasaina rehefa mamatotra ny drywall amin'ireo vy vy kely.
Ny visy volo maina manify dia manana kofehy vitsy kokoa izay mahatonga azy ireo hihazona tery kokoa sy hidina haingana kokoa amin'ny toerany. Matetika izy ireo no ampiasaina rehefa mamatotra ny rindrina maina amin'ny paosin-kazo.
Ankoatr'izay, visy volo fanamainana manokana novolavolaina ho an'ny tanjona manokana. Rehefa mamatotra ny drywall amin'ny tadin-by vy mavesatra dia aleonao misafidy volo fanamainana mandavanta-tena fa tsy mila lavadavaka mialoha.
Mandritra izany fotoana izany, misy visy volo maina. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny basy visy, izay manafaingana ny fametrahana.
Ankoatr'izay, misy visy fanamainana marobe miorina amin'ny rindrina izay afaka miaro amin'ny harafesina.
Ny visy drywall no fomba tsara indrindra hanamafisana ny drywall amin'ny akora fototra. ny visy drywall dia manome ny vahaolana tonga lafatra amin'ny karazana rafitra drywall.
Ampiasaina indrindra amin'ny fametahana ireo takelaka maina amin'ny vy na vy vita amin'ny vy, ny visy maina dia misy kofehy tsara ho an'ny vy vy ary ireo kofehy madity ho an'ny zana-kazo.
Ampiasaina koa amin'ny fametahana vy vy sy vokatra vita amin'ny hazo, indrindra mety amin'ny rindrina, valindrihana, valindrihana sy rindrina diso.
Ny visy drywall natao manokana dia azo ampiasaina amin'ny fananganana fitaovana sy fananganana akustika.
Ny visy vy-oksida mainty dia tsy harafesina kely amin'ny tontolo maina. Ny visy vy nopetahany zinc dia manohitra ny fahasimbana amin'ny tontolo mando. Ny visy vy tsy mahazaka-manohitra mainty mifangaro vy miady amin'ny akora simika ary mahazaka tsifotra sira adiny 1.000.
Manaraka: Hex bolt
Screws an'ny drywall kofehy tsara
Screws an'ny drywall an'ny loha Phillips
Sokiro fanamainana fosidratika
Bolida heksim-by hex mainty, Din6921 Flange Nuts, Hex Bolts mahery, Hexagon Socket Head Bolts, horonan, Boloky Hex Bolts mainty,